MANAFAKA AMIN'NY FAHANTRANA NY TOMPO | FJKM Amboniloha
MANAFAKA AMIN’NY FAHANTRANA NY TOMPO
Ambara fa anisan’ny firenena latsaka anaty fahantrana lalina i Madagasikara. « Iza re no afaka hanafaka antsika amin’ity fahantrana mahazo antsika ity e? » Matetika dia olona, fikambanana, firenena matanjaka ara-bola na ny fombafomba ihany koa no antenaintsika hanafaka antsika amin’ny fahantrana. Miezaka tokoa ny hahatsara fifandraisana amin’izy ireny na ny mpitondra na ny vahoaka entina. Indraindray dia toa mahavonjy amin’ny fotoana fohy ireny kanefa amin’ny ankapobeny dia vao miha mampiditra anaty lalina satria miha sarotra sy miha misondrotra fa tsy miha midina ny vidim-piainana. Tsy vitsy no tokantrano arahin-trosa mandrakariva ary dia maro ny manan-katao no manararaotra izany fahavoazana izany. Vokany, ny mahantra miha mahantra hatrany ary ny manankarena miha manankarena hatrany.
Ry Malagasy malala, na mpitondra ianao na vahoaka entina, tsarovy fa tsy vahaolana hahatafavoaka ny firenena amin’ny fahantrana ny fanaranam-po na ny amin’ny fidorohana zava-mahadomelina na ankolaka na mivantana (toaka, sigara, rongony,…) Na ny manatanteraka na ny mampanao na manome alalana hanao izany (mamokatra, manao dokam-barotra, mivarotra zava-mahadomelina) dia samy mandray anjara amin’ny fampahantràna ny firenena avokoa raha ny tena marina. Marina fa mampidi-bola vetivety na ho an’ny firenena na ho an’izay mivarotra izany izy io saingy tena manapotika ny maha olona ny olona izay harena fototra ao amin’ny firenena iray: ny olona mantsy no voalohan-karena, mamokatra ho an ‘ny firenena, afaka mitrandraka sy mitantana amim-pahamarinana ny harena ao amin’ny taniny ka hanafaka azy tokoa amin’ny fahantrana. Ilay olombelona izay voalohan-karena mihitsy anefa no marary, potika raha mandray zava-mahadomelina izy. Iza, ohatra, no tsy mahita izay efa voasoratra eo amin’ireny fonosan-tsigara ireny: “poizina mahafaty,…mahavoa ny homamiadana…mampianadratsy sy manimba taranaka ny setro-tsigara”. Kanefa anie dia toa mamono eritreritra momba izany voka-dratsy eo amin’ny fahasalamana izany na izay mpamokatra na ny mpivarotra na ny mpividy sy mpifoka! Tena manimba ny tenantsika izay tempolin’Andriamanitra io zava-mahadomelina io.(Isa.5,11.12; 1Kor.3,16.17) ATSAHARO RE NY FAMPAHANTRANA NY FIRENENA E! MIBEBAHA KA ATOLORY HO AN’ANDRIAMANITRA NY TENANAO,ENY, NY FIRENENTSIKA FA AZA ATOLOTRA HO AN’I SATANA.
“Raha ny oloko izay nantsoina amin’ny Anarako ho avy hanetry tena ha hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny.” (2Tan7, 14)
Ambarako fa very maina foana ny ady amin’ny fahantrana raha hadinonao ny mifandray mivantana, mandrindra fihavanana amin’ilay Tompon’ny harena Izay afaka miasa ka manafaka ny olona amin’ny fahantrana. Araho re ny Teniny. Aza hadinoina fa “an’i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy.” (Sal.24, 1) “Izy no mampanakarena sy mampahantra; manangana ny malahelo ho afaka amin’ny vovoka, manandratra ny mahantra.” (1Sam.2, 6-8). Raha manatona Azy ianao dia Izy mihitsy no manoro anao ny lalan-kombàna hahafahanao marina amin’ny fahantràna. Fiainana feno sy maharitra fa tsy mandalo no omeny anao (Jao.10, 10).
Ireto misy torohevitra vistivitsy omen’ny Soratra Masina hialàna amin’ny fahantràna:
Miverena amin’Andriamanitra ka atolory ny tenanareo “ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao; fa miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina.” (Rom.12, 1.2). Aoka tsy ho fombafomba ivelany, hitadiavana laza na voninahitra , na ho filàn-javatra fotsiny ny fivavahana fa tena fanolorantena ho an’Andriamanitra marina. Fivavahana Iainana e! izay no ankasitrahan’Andriamanitra (Lio.21, 1-4; Gal.1,10). Ao amin’ny Jesoa no tena misy ny fahafahana (Jao. 8,36; 1Jao.5,12)
Miaingà amin’izay mety ho kely misy eo antananao. Fantaro inona no talenta nomen’Andriamanitra anao. Mipetraka aminao ny fanontaniana : “Inona no anananao? (2Mpa.4,2; Mar.8,5)
Ento eo amin’ny Tompo izay anananao sy ny olanao. Avelao Izy hiasa ka araho izay tolo-tsaina na toro-lalana omeny anao. Minoa fa hampitombo izay eo antananao izy ka hanafaka anao sy ny manodidina anao amin’ny fahantràna.(2Mpan.4,7; Mar.8,8; Sal.70, 1.5)
Aza mangatakandro… Tanteraho amin’ny finoana izay asain’ny Tompo ataonao. Aoka hafàna fo amin’ny fanompoana Azy. Aza manao izay tsy ampanaovin’ny Tompo anao dia izay tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra.(Apo.3,14-22)
EO AM-BARAVARANA NY TOMPO KA MANDONDONA, HENOY IZY, VOHAY NY VARAVARANA AMPIDIRO AO AMINAO IZY KA HIARA-MISAKAFO AMINAO, ARY IZY AMINAO. FIAINANA BE DIA BE NO OMENY ANAO. (Apo.3, 20)